रवि लामिछाने र ऋषि धमलामध्ये एक जनालाई रोज्न भनेपछि कसलाई रोजिन् करिश्माले ? (भिडियो हेर्नुस्) – PathivaraOnline
Home > अन्तर्वार्ता > रवि लामिछाने र ऋषि धमलामध्ये एक जनालाई रोज्न भनेपछि कसलाई रोजिन् करिश्माले ? (भिडियो हेर्नुस्)
रवि लामिछाने र ऋषि धमलामध्ये एक जनालाई रोज्न भनेपछि कसलाई रोजिन् करिश्माले ? (भिडियो हेर्नुस्)
admin September 13, 2020 अन्तर्वार्ता, भिडियो, मनोरञ्जन	0
काठमाडौँ । नेपाली सिने जगतकि सदावहार नायिका करिश्मा मानन्धरले सन्तान फिल्मबाट नेपाली रजतपटमा पाइला टेकेकी हुन् । कलाकारिताको अलावा राजनीतिमा समेत हाम्फालेकी करिश्मा फिल्मका अवला सामाजिक संजनलमा पनि उतिकै सक्रिय रहेकी छिन् । ‘सन्तान’बाट करिअर सुरु गरेकी करिश्माले आफ्नै छोरीलाई फिल्ममा डेक्यु गराउने तयारीमा गरेको लामो समय भएता पनि सुखद खबर भने आइसकेको छैन ।
लकडाउनको समयमा फुर्सदिलि भएकी उनि एसईईको अध्ययन पूरा गरेर उच्च शिक्षा पढ्ने धोको पनि पुरा गर्ने गरेकी करिश्माले हालै एक अन्तरवार्तामा आँफुलाई पनि कोरोनाको डर लागेको बताएकी छिन् । सामाजिक संजालमा निकै सक्रिय सुन्दरी करिश्माले कोरोना कहरको समयमा मानसिक अवस्थालाई उच्च राख्न समेत सबैमा अनुरोध गरेकी छिन् ।
लामो समय देश बाहिर बसेर बसेर अनुभव संहालेकी करिश्माले सिने पत्रकार प्रकाश सुवेदीसँगको अन्रवार्ताका क्रममा चर्चित पत्रकार रवि लामिछाने र ऋषि धमला मध्ये एक जनालाई रोज्न लाउदा उनले भने ऋषिलाई रोजेकी छिन् । उनीसँग गरिएको यो रमाइलो अन्तरवार्ता हेर्नुहोस् ।
गायिका निशु ढकालको रमाइलो गीत “तिहार आयो” बजारमा – भिडियोमै हेर्नुहाेस्